I-Pedro Rodriguez Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain I-Pedro Rodriguez Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'Umququzeleli'. Ibali lethu le-Pedro Rodriguez yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts kuletha iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe kodwa abambalwa abajonga uPetro Rodreguez Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye u-adieu, qalisa Qala.
I-Pedro Rodriguez Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UPedro Eliezer Rodríguez uLedesma wazalelwa ngomhla we-28th kaJulayi 1987 eSanta Cruz de Tenerife, eSpain ngunina, uMonserrat Ledesma Encinoso kunye noyise, uJuan Antonio Rodríguez Pedro.
UPedro nguye yedwa umntwana wabazali bakhe. Wayengakaze athathwe ngumntwana.
U-Pedro wayeqeqeshiwe kakuhle kwaye wayenebudlelwane obusondeleyo nabazali. Ukuxhotyiswa ngakumbi kwisikolo nakwizemidlalo kwakuqala ukuqala ebomini kumfana omncinane. Ufumene imilinganiselo epheleleyo phakathi kokufunda iincwadi zakhe nokudlala ibhola kunye nabahlobo.
U-Pedro wayenokuqala kwebhola (emva kwe16). Ubunzima bakhe bobudala baqala ngo-2003 xa waqala ukujoyina isikolo saseSan Isidro apho adlala khona kwi2004.
Kwi-2004, wathatha ingqwalasela FC Isikolo seBrazil. UPedro wagqiba ityala kwiqela kwaye emva koko wamenywa ukuba angene kwisikolo seklabhu yaseCatalan. Waqhubela phambili izifundo zakhe kwi-academy waza wadlala iqela leqela leqela kulutsha ukuya kwi-2005.
Unyaka we-2005 wabuya kakuhle kuye njengoko wanikezelwa kwisivumelwano somsebenzi esasayinayo kunye nendawo kwindawo yeqela lesithathu. Phakathi kwe2005-2007, uPedro Rodríguez waba ngumdlali weqela lesithathu.
Izibonakaliso ezincinci zeSpaniard zamenza wakwazi ukudlala iqela lesibini leqela leqela ukusuka ku-2007 apho wafumana khona iinjongo ezininzi.
Ku-2009 / 2010, uPedro waba ngumdlali wokuqala kumlando ukufumana amanqaku emincintiswano ehlukeneyo yeeklabhu ngonyaka omnye, irekhodi elilingana kuphela nguLionel Messi owenzayo kwi-2011.
Kuphela, uPedro wadlala i-321 umdlalo osemthethweni kwiqela lokuqala leBarcelona, ​​ukufaka iinjongo ze-99 kunye nokubonelela nge-46 encedisayo engaphezulu kwe-50% (25) eya kuMesiya.
I-Pedro Rodriguez Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Unina likaPedro, uMonserrat Ledesma Encinoso noyise, uJuan Antonio Rodríguez banolwazi oluncinane malunga nobuntu babo kwi-intanethi.
Ingxelo evela kwimithombo ehloniphekileyo kodwa ibonisa ukuba bahlala kwidolophu yaseSpain yonxweme yaseSanta Cruz de Tenerife ukuthandwa njengowesixeko sendalo.
Benze okusemandleni abo ukuvelisa unyana wabo oyedwa ngendlela engcono kakhulu eyayihlawule. UPedro unika abazali bakhe yonke into abayidingayo.
I-Pedro Rodriguez Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Uthando lukaPedro Ubomi lufanelekile. Wathetha kunye noCarolina Martin ongu-akhawunti kwaye kuthiwa ngu-5 iminyaka emdala kunabo. Badibana xa uPedro wayengu 17. Ngelo xesha, iCarolina yayiyi22.
Ngokungafani namanye amantombazana amantombazana, i-pedro yayigcina ingabikho ngenxa yezizathu ezifanelekileyo. Bobabini bathanda iintaka zatshata ngomnyaka we-2005 emva kwezinto ezifutshane kakhulu. Ngezantsi iifoto ezibonisa umanyano wazo.
Pedro Wedding Ifoto
Khangela lesi sithombe esikhulisiweyo ngezansi. Babonakala behle kunye nemoto yabo.
Ngaphantsi kwesi sibini esinezibuko zesityebi seBodega Iniesta iwayini enomngane omhle kakhulu kaPedro kunye nomlingane wangaphambili weBalloon, Andres Iniesta.
Bathetha ukuhlala malunga ne-8 iminyaka ngaphambi kokuba babe nomntwana. Esi sibini sino-unyana wabo wokuqala, uBryan Rodriguez Martin ngomhla we-4th ngo-Ephreli 2013.
Usapho lukaPedro Rodriguez
UCarolina Martin unothando kakhulu kwaye uyamkhathalela kakhulu umyeni wakhe. U Pedro ngokwakhe ungumyeni onothando kwaye uxanduva lwakhe kwintsapho yakhe. Akazibandakanyi nayiphi na into. Ubomi bakhe bomtshato buyimpumelelo enkulu. Kwakhona, babonakala behle kunye
UPedro Rodriguez nomfazi, uCarolina Martin
Ubuhlobo babo buxhomekeke kwintando, ukuthembela kunye nokuqonda. Ngako oko, abazange bacinge ngokuhlukana okanye ukwahlukanisa. Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba uKarolina Martin kuthiwa uyisondlo esondele kakhulu kuDaniella Semaan onomfazi Cesc Fabregas njengoko ngexesha lokubhala eli nqaku.
Njengoko abantu baxabisa ubudlelwane bomtshato bukaPedro, onokuthiwa okufanayo Radamel Falcao, Nemanja Matic, ngokungafaniyo, Edinson Cavani kwaye Adriano Ubomi bomtshato obhalwe ngemicimbi yomtshato kunye neengxabano.
I-Pedro Rodriguez Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulondolozwe iNkcazo yakhe yabantwana kwiBhangeruptcy
Inkampani yasePitoro yobuntwana, iSan Isidro sele igcinwe ekubongeni kwebhanki kuhambo lukaPedro Chelsea.
Iqela laseSpeyin-tier elivela eTenerife lafumana i-€ 420,000 ukusuka ekudlulisweni komdlali Chelsea, isamba esisiqingatha sesine sebhajethi yabo yonyaka (€ 85,000).
U-Pedro wayengumdlali we-10th Spaniard ukuba adlale umdlalo we-Chelsea FC kwi-Premier League League.
I-Pedro Rodriguez Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Amandla nobuthathaka
Usebenzisa zombini unyawo lwakhe kumdlalo oye wambonisa ukuba udlala ngokubhekiselele ekudlaleni ngapha nangapha.
Unobungcali kwikhono lokuqhawula. Unokulawula kakuhle kwibhola kumdlalo. Wayenomdla omkhulu kunye nezakhono ezamenza ukuba abe nomdla kwaye azixabise ngokukhawuleza kunye nokubeka ixesha elide kunye nefutshane.
Ubuthakathaka bukaPetro kuphela bubungcali bakhe bokuhamba.
UDavid Silva Ibali leNtsana yeNgxelo Plus Untold Biography Facts
UDani Carvajal Ibali leBantwana leNdaba ye-Untold Biography Facts